Soo degso MD-88 Delta Twin Pack FSX & P3D - Rikoooo
downloads 75 231
Waa iyada oo leh ogolaanshaha nooca ah ee Mitsushi Yutaka (ex POSKY) in Rikoooo u beddelay tan add-on loogu talagalay FS2004 ee u dhashay FSX / P3DQaabka v4. Thanks to 3DS Max iyo barnaamijyada MCX waxaan ku darnay cabirro ku yaal baakadka ay ka mid yihiin FMC (Honeywell), hagaajinta gudiga 2D oo ay la socoto isugeyn buuxda oo ah 3D isbeega.
Xirmadan ayaa waxaa ku jira taxanaha MD-81/83 iyo 88 oo ay la socdaan 17 tayo leh oo ay kujirto marin dhab ah oo loo yaqaan 'Alfa-channel' (milicsiga). Codadka dhabta ah ee ka imanaya mashiinka Pratt & Whitney JT8D, 360-digsi casho qaali ah, guddi 2D ah oo uu abuuray Marco Spada, oo ah nooca duulimaadka aad u fiican oo leh qaabab habboon oo lagu dhejiyay, iftiin si fiican u taagan, iyo saamaynta qiiqa.
Waxaan kugula talineynaa in lagu duulo diyaaraddaan nooca 2D Panel maxaa yeelay VC waa mid aad uga qurxin badan tan la taaban karo.
Aqri dukumintiga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Nooca: Delta Airlines - Diyaaradda Mareykanka - Daacadnimo - Aero Mexico - Aero Mexico AMS - Aero Republica - Avianca - Alitalia - TWA - Waqooyi-galbeed - Orient Thai - GMG - Royal Jordanian - Iberia: Stephen browning - Delta Airlines 1999 - Taxanaha Star Alliance - Scandinavian Diyaaradaha.
Shirkadda McDonnell Douglas MD-80 waa duullimaad Mareykan ah oo ay soo saartey soo-saaraha diyaaradda McDonnell Douglas. Kii dambe ayaa horumariyay oo suuq geeyay horumar, MD-90. Kadib markii uu iibsaday McDonnell Douglas sanadkii 1997, Boeing waxay kor u qaadeysaa diyaaradda, iyadoo ku hoos jirta magaca Boeing 717
Qore: Model / VC waxaa qoray Mitsushi Yutaka (ex POSKY). Dhalad FSX/P3D beddelaad iyo xirmo by Rikoooo. Gudiga 2D ee uu qoray Marco Spada